Ungabafumana njani abalandeli kwiTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ubafumana njani abalandeli kwi-twitter?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 233
I-Twitter iye yaba yintanethi yentlalo kunye nokukhula okukhulu kunye neemfuno zoluntu lwe-cyber. Ngombulelo kuncedo olumele i-tweet elula kunye nezibonelelo ezinkulu ezibandakanya oko, i-twitter iyavela njengesixhobo esifanelekileyo, esikhawulezileyo nesithe ngqo kunxibelelwano kuye wonke umntu.
Uzalelwe kwisandla sikaJack DorseyEmuva ngo-2006, kwiminyaka embalwa, ikwazile ukufumana inani elipheleleyo labasebenzisi abazizigidi ezingama-393. Kwaye ufumane ngaphezulu kwe-2500 yezigidigidi zeedola ngonyaka.
Njengomsebenzisi we-twitter, unokufuna ukwandisa inani labalandeli kwiprofayili yakho. Kungenxa yokuba ufuna ukuba nefuthe okanye kufuneka ukhuthaze inkampani oyenzayo. Kukho iingcebiso onokuthi uzilandele ukufezekisa oku.
Bhala iinkcukacha zakho
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuqinisekisa ukuba iprofayile yakho igqityiwe. Oko kukuthi, uchaze zonke izinto kunye namacandelo ayimfuneko ukudlulisa ukuba ungubani na kuluntu luphela.
Ukuqala ngegama lakho, ukuba awukabikho, ngexesha lokubhalisa. Kuya kufuneka uyibhale ngoonobumba abangaphantsi kwe-15 kwaye iya kubonisa injongo yeprofayile yakho.
Emva koko, kufuneka ubhale ibhayiloji yakho ngoonobumba abangaphantsi kwe-160. Isishwankathelo kwaye icacile, ukuze kuthi, kwimeko yokufunda ngokukhawuleza, abo badlula kwiprofayili yakho, bathathe isigqibo sokulandela ukuba ubabambe ngamehlo nangasiphi na isizathu.
Yazisa wonke umntu ukuba ungafikelela phi kwindawo okuyo kwaye ukuba unedilesi yewebhu, yibeke kwicandelo lewebhusayithi.
Ifoto yeprofayili eyahlukileyo
Ifoto yeprofayili inokuba yinto ecacileyo yokwandisa inani labalandeli. Ngomfanekiso wepikseli engama-400 x 400, kufuneka uqinisekise ukuba abalandeli abanokuhlala kwiprofayile yakho. Njengomfanekiso wentloko obonakalayo kunye nomtsalane.
Qiniseka ukuba yomibini le mifanekiso ayinalo uyilo olothusayo kuphela, kodwa ikwayi-pixel.
Okokugqibela, unokufaka i-tweet phezulu kwiprofayile yakho, ukuze ibe yeyokuqala i-tweet ebonwa ngabo bagqiba ukungena kuyo.
Ngamana ukubonakala kweprofayili yakho kungakhula!
Kuqhelekile kwaye yinto eyenziwa ngabasebenzisi abaninzi, uwele ukukhuthazwa kweeakhawunti zakho ngokusebenzisa ezinye iinethiwekhi zentlalo, njenge-Facebook, i-Instagram okanye i-pintarest. Ngokushicilela iprofayile yakho ye-twitter ngamanye amaxesha kwinethiwekhi, uqinisekisa ukuba inani elikhulu labasebenzisi abanokubakho liya kukulandela
Esi sisixhobo esifanelekileyo sokwazisa kunye nentengiso. ukuba yinjongo yeprofayile yakho ye-twitter. Ukubeka uphawu, njengoko kusaziwa njalo, kunyuka ngokuwela unyuselo kwinethiwekhi yakho. Ngale nto, unokutsala umdla wabantu abanomdla kwi-brand yakho ngokusebenzisa iiphakheji zokwazisa.
Ngakolunye uhlangothi, Ukubeka ikhonkco lakho le-twitter kwiwebhusayithi yakho kukwavelisa abalandeli. Ndiyabulela kobu buqhinga, abo bafumanisa iwebhusayithi yakho baya kuba nakho ukunxibelelana ngokuthe ngqo kunye nawe ngeprofayile yakho. Ngokukwanjalo, kufanelekile ukuba udibanise iprofayile yakho kunye ne-imeyile yokunxibelelana.
1 Amanyathelo okuqala
1.1 Bhala iinkcukacha zakho
1.2 Ifoto yeprofayili eyahlukileyo
2 Ngamana ukubonakala kweprofayili yakho kungakhula!
Ndizikhuphela njani iifoto ze-instagram?
Indlela yokuvala iTelegram yeWebhu?